YINTONI UMORGANITE? KWAYE I-PINK PINK ENGAGEMENT RINGS SIYAYITHANDA - UTHETHATHETHWANO
Eyona Uthethathethwano Nasi isizathu sokuba imisesane yokuzibandakanya kaMorganite iQhele ngoku
Nasi isizathu sokuba imisesane yokuzibandakanya kaMorganite iQhele ngoku
Ilitye elinqabileyo elipinki lithatha i-Instagram ngoqhwithela. I-Devans Photography / iShutterstock
U-Lauren ubhala amanqaku e-Knot yeHlabathi kuluhlu lwezihloko ezivela kwimitshato yoqobo kunye nezincoko zobuqu kwirejista nakwifashoni.
U-Lauren unamava alishumi kwishishini lomtshato.
U-Lauren wayengumfundi wasemsebenzini kunye noMncedisi woHlelo loMtshato kwi-Knot.
Ukuhlaziywa kwe-Mar 31, 2020 Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini.
Kunye nezinye izibini ezijongayo amakhonkco othethathethwano aqhelekileyo , uninzi lujonga amanye amatye kuluhlu lwemibala. Nangona uninzi luqhelekile kwidayimani yeklasikhi ngelixa uthenga, kukho enye indlela enyukayo ekuthandeni: morganite. Kodwa yintoni i-morganite kwaye kutheni inabafazi abaninzi kangaka nje?
Nokuba ujonge nantoni na ngaphandle kwedayimane okanye utsalwe kwangoko kumthunzi wothando weli litye lipinki, kukho isizathu sokuba amakhonkco okuzibandakanya e-morganite abangela ukuphefumla.
Yintoni iringi yokubandakanya uMorgan?
Kubafazi abatshatileyo abanombala, amakhonkco omtshato ayigugu enza ukhetho oludlamkileyo noluthandwayo. Ukusuka kwi-peridot yabathandi abaluhlaza ukuya kwisafire okanye i-aquamarine kwabo banomdla kakhulu kwibala eliluhlaza, ubucwebe belitye lokuzalwa bunokuba nentsingiselo ngakumbi kunesangqa sokubandakanya idayimane. Kodwa ngokukhetha okupinki okupinki okuphefumlayo, amakhonkco e-morganite anikezela ngenkangeleko ekumgangatho ophezulu kunye ne-hue eyahlukileyo. Ngelixa ujonga iivenkile zobucwebe ngeli litye lixabisekileyo, kubalulekile ukuba ungadideki kukhetho lwe-'emerald emerald '.
NgokweGemological Institute of America, i-emerald epinki ayilixesha elamkelekileyo kuba iyalahlekisa. I-GIA icacisa ukuba zombini i-emeralds kunye ne-morganites ziindidi zebheryl yamaminerali. Ke i-emerald epinki iyinyani ye-peachy-pink epinki ye-beryl, eyi-morganite- kwaye akufuneki ibhalwe enye into.
Ayisiyiyo le ndandatho nje yokugqabhuka kwesiko kunye nesibheno sokunyuka kwamagolide kodwa ikwakhona ifikeleleke ngakumbi kuneedayimane ezipinki kunye nesafire, ezinikezela ngenkangeleko efanayo. Oko kuyenza le ibeyindlela yanamhlanje ngelixa uziva uthambile. Kwaye lilitye elinqabileyo elilungele uhlahlo-lwabiwo mali kwiindidi zeekati, ukusika, kunye nezitayile ukuncedisa naluphi na uyilo ocinga ngalo.
Thenga ezinye zeeringi esizithandayo zokuhonjiswa nge-morganite, ngezantsi.
Imisesane yokuzibandakanya kaMorganite
Isangqa esiphefumlelweyo sokusika i-morganite indandatho yokuzibandakanya ayisiyo nje into eqhelekileyo. Nge-halo yedayimane ekhazimla ngokuchasene nokuseta kwayo kwegolide, ilitye eliphakathi le-pink morganite liphuma macala onke.
UMlambo iNayile Umqamelo usike i-morganite yedayimane ye-halo ring ring, $ 2,900, BlueNile.com
Kuba umtshakazi ufuna i-bauble yanamhlanje kunye naphantsi, le ndandatho ipinki imthubi yiyo. Iseti yegolide emhlophe eyenziwe ngezandla iyafumaneka kwi-matte, ipolishiwe, okanye igqityiwe ukugqitywa kwaye ineempawu ezifihlakeleyo ecaleni kwebhanti encinci. Ilitye le-morganite elipinki linobunzima obumalunga ne-2.5 carats kwaye libamba ukukhanya ngenxa yokusikwa komqamelo.
OneGarnetGirl Isangqa se-morganite palladium isangqa segolide esimhlophe, $ 763, Etsy.com
Inkangeleko yentsimbi exubeneyo yale ngxelo iphindwe kabini-halo morganite ring pops ngokuchasene neziko lelitye lepeach-pink. Ngapha koko, i-cushion-cut, prong-set sets morganite ilitye likhanyisa ubufazi kodwa linesibindi kolu seto lufanelekileyo.
UJames Allen I-14K ​​inyuke i-morganite yegolide kunye nedayimane ephindwe kabini ye-halo cocktail ring, $ 1,490, JamesAllen.com
Misela ekukhetheni kwakho igolide emhlophe okanye igolide evukile, eli cwecwe lokuzibandakanya kwendandatho yelitye elinqabileyo libonisa ukumisa. Ukusuka kwiidayimani ezijikelezayo ezibengezela ibhendi kunye ne-halo kwiziko le-peachy-pink morganite.
ILusterLaValliere 14K igolide emhlophe, ivukile isiguqo segolide esisike i-morganite, i- $ 900, Etsy.com
I-Pear-Sika iMorganite Imisesane yokuzibandakanya
Kay amatye anqabileyo
Ukusikwa okweeperile kwale ring ye morganite ayisiyiyo yodwa into eyenza ukuba ibe yinto eyothusayo kwindandatho yedayimane yendabuko. Iziko lokuma kweeperile linee-halos ezimbini zedayimani esikiweyo kunye needayimani ezijikelezileyo, inika le ringi yegolide iphindwe kabini kwaye iyintombazana.
Umgaqo weNeil I-morganite indandatho yokubandakanya i-carat yedayimane kwi-14K yenyuka igolide, i-3,800 yeedola, IKay.com
Oomolokazana abafuna ubucwebe be-morganite kunye nomtshakazi wobugcisa, le ringi yegolide yokubandakanya kunye nebhendi yomtshato ilungile. I-pear pink pegan morganite ihleli kwi-claw prong setting kunye ne -09 carat diamond band. Ibhendi yomtshato ehambelana nesiqingatha-halo somtshato womtshato oneedayimane eziethe-ethe kunye nendandatho yelitye le-morganite, egqibezela ukubonakala okuphefumlelweyo.
Ukuqaqamba Iseti yomdaniso wokubandakanya indandatho, $ 1,123, Etsy.com
Iindleko eziphakathi kwi-dj yomtshato
Ngaba ujonge iringi ngombala opinki othambileyo? Ibhendi yedayimani ye-pavé kule 14K yaphakamisa iringi yokuzibandakanya kwegolide esonga idayimane ephindwe kabini, ngokuchaseneyo nelitye lepeach elisikiweyo lepear-cut morganite.
UMlambo iNayile Isangqa se-morganite esikiweyo, $ 2,500, BlueNile.com
Imijikelezo kaMorganite yokuzibandakanya
Lungiselela ukuntywila ngaphezulu kolu loyilo lweklasikhi ngokudibanisa okuhlaziyiweyo. Ayisiyo kuphela idayimani yehalo kunye ne-shank ehambelana nelitye lokuzibandakanya kwilitye le-morganite kodwa kunye ne-rose claw prongs yenza umahluko okhangayo kumbala.
Zales I-7.0mm ye-morganite kunye ne-diamond yentsimbi yokubandakanya, $ 449, Zales.com
Eli litye lenyanga eliphefumlelweyo le-Art Deco kunye ne-morganite bridal set has a vibe vibe ngelixa uziva uhlaziyekile. Ilitye leziko le-morganite elingapheliyo lihleli kwirowuthi yegolide yeclaw prong ejikelezwe ngamatye amabini enyanga asikiweyo. Kodwa ngebhendi yomtshato we-curve's cut-cut cutstone stonestone ejikeleze i-morganite, iyona nto ifanelekileyo kwi-peach-pink beryl.
SzekiStudio Isangqa sokubandakanyeka komtshato wokubandakanya umsesane weseti yomtshato yenyuka ngegolide, $ 800, Etsy.com
Ukukhangela i-bauble yeklasi kunye nomnxeba wanamhlanje? Le ndandatho yokuzibandakanya igolide emhlophe ibalaselisa i-morganite epinki eyahlukileyo kwaye yenza ukukhanya kube lula. Ngebhendi yedayimani ye-pavé kunye neepringi ezibekwe phezulu ezenza ukuba i-morganite ejikelezayo ibonakale ngathi iyadada, useto lubuthathaka kwaye aluphelelwa lixesha.
ohlawulela isidlo sangokuhlwa sokuziqhelisa
Umhlaba oqaqambileyo I-morganite ballad diamond ring, i- $ 1,840, BrilliantEarth.com
Oval Morganite Engagement Imisesane
Isangqa semarganite esipinki esinombala opinki sinombulelo welixesha kuseto oluneenkcukacha lwedayimane olubeka iziko lelitye elinqabileyo. Ngeendawo ezintathu zedayimani ekhanyayo, esi sikhazimlisi siyakucima kwikona nganye.
UMlambo iNayile isangqa se-oval morganite, i $ 2,400, BlueNile.com
Awudingi idayimane epinki kwisangqa esimangalisayo sokuzibandakanya kunye nee-peachy-pink hues. Le stunner yamatye amathathu isetiwe kukhetho lwakho lwe-14k rose igolide, igolide emhlophe, okanye igolide etyheli.
SzekiStudio I-oval cut cut morganite yokubandakanya iringi yenyuka ngegolide, $ 550, Etsy.com
Kwinto ethile ebalaseleyo phakathi kwamanye amakhonkco okuzibandakanya e-morganite, jonga olu seto lubuthathaka kunye nothando. Iidayimani ezimiselweyo ze-bezel ecaleni kwebhendi ejikeleze iziko le-oval elingaphantsi kwelitye le-morganite kunye nezinto ezibonakalayo zegolide ezandisa umbala wayo opinki. Le yinto efihlakeleyo!
UJames Allen I-14k iphakamise i-bezel yegolide iseti i-morganite kunye ne-diamond yegolide yeentyatyambo, $ 820, JamesAllen.com
Imisesane ye-Emerald-Sika iMorganite
Amakhonkco egolide eRose abe lukhetho oluthandwayo kunxitywa yonke imihla kodwa ilitye elisikiweyo elipinki eli-emerald liyenza ibonakale. Ukubeka i-morganite kwi-halo edayimene nedayimani, olu luyilo lube loludala kunye nolungaqhelekanga.
UMlambo iNayile I-emerald-cut morganite ring, i- $ 1,825, BlueNile.com
Le nkcazo ye-emerald-cut morganite ring engagement i-oozes yinkqubela phambili engapheliyo. Ibhendi yedayimani epeyintiweyo ecekeceke icofe ilitye elinqabileyo lomgangatho we-morganite elinobunzima obuphantse babe zii-carats ezi-5.
ICaratRing I-morganite ring 14K yenyuka iringi yegolide solitaire, $ 866, Etsy.com
I-halo yedayimane 'edadayo' inika le ndandatho yokuzibandakanya epinki into engalindelekanga eya kuthi ngokuqinisekileyo ivele emnweni wakho. Ibhendi enedayimani enebhanti idala ukongezwa okucekeceke kwaye igqibezela inkangeleko ephezulu.
UJames Allen 14K i-pink morganite yegolide kunye nedayimane ejikelezayo yentsimbi, $ 1,520, JamesAllen.com
UKim Kardashian: U-Kanye West ebesazi ukuba ndingathanda ukuba ne-Engagement yam kwiKhamera
Ikhethekileyo: UAlex kunye noReagan Bregman kumtshato wabo wasemva kwendlu
Ezona zixhobo zintle zeHalloween zoDumo lweeNdawo zika-2017: Bona Zonke iifoto
Laminate vs Vinyl Flooring (Umahluko-Iinkonzo kunye neNgxaki)
'Ukutshata ekuboneni kokuqala' Ukuphindaphinda: UTom ubuza uLillian kwisivumelwano sasemva komtshato
I-Sugarland kaKristian Bush Ubhala 'Yithi Ewe kwiingubo' Ingoma yengoma ngonaphakade: Ividiyo yoMculo Sneak Peek!
I-Princess Eugenie kunye neJack Brooksbank's Joint Monogram Ityhilwe
Ukutshata kwiNeil yokuQala, uSam emva koKwahlukana: Sakha ubuhlobo bethu
Iingoma zokuNgena zoMtshato zabantu abasandul 'ukutshata eziya kuthi zitshabalalise nasiphi na isihlwele
UMagic Johnson kunye noMfazi wecookie bonwabele uMthendeleko wama-25 weSikhumbuzo soMtshato eFrance
Umtshato kaTom Brady kunye noGisele Bündchen: Baboyisa njani iMizabalazo
Isipho seminyaka engama-20 somyeni
iilokhwe zomtshato zemitshato emincinci
Ixabisa malini umtshato womtshato?
itshathi yobungakanani bombhoxo
ubakhetha njani oomolokazana bakho
amakhonkco okuzibandakanya amahle kakhulu
Iingcamango zomtshato ezizimeleyo ezi-Instagram-ezifanelekileyo
I-America's Next Top Model ye-Adrianne Curry ekhutshwe kwi-'Mdlalo weTrone '-Umtshato weTheed
I-Cardi B Debuts Photo Photo ukubhiyozela iSikhumbuzo sakhe